Ukujonga iphepha le-50.000. Isikhululo esilandelayo 2.000 iindwendwe zemihla ngemihla | Iindaba zeGajethi
HMolweni nonke, ngaphezulu kwenyanga enesiqingatha (iintsuku ezingama-52) ndibhiyozele nani nonke ukujonga iphepha elili-10.000 VinagreAssino.comKweso sithuba ndathi ndlela ntle ndinethemba lokukuxelela kwakamsinya ukuba ibhlog leyo ikhule yangama-50.000 51.000 ukujonga iphepha. Yiyo loo nto namhlanje ndifuna ukubhiyozela kunye nani ukuba eli nani liwile ngale ntsasa kungokunje lingaphezulu kwamaphepha angama-XNUMX alayishiwe kwaye ke ngoko ndikwazi ukungqina ukuba le njongo sele iphunyeziwe.
EOku kuthetha ukukhula okungaphezulu kwe- 400% ngeli xesha linye, elibonisa ukuba okwangoku ibhlog yakhe isempilweni. Ngokungathandabuzekiyo iye yanceda inyani yokuba ihlaziya phantse yonke imihla ngeli xesha kunye namakhonkco angenayo afunyanwa yibhlog evela kwamanye amaphepha. Uninzi lwezi khonkco zivela kubasebenzisi abathanda oko bakufumanayo kula maphepha kwaye babanike njengesalathiso kwiindawo ezahlukeneyo. Ndifuna ukubulela ngokungazenzisiyo kubo bonke aba bafundi badibanisa ibhlog kuba banceda kakhulu ukukhula kwe- VinagreAssino.com.
LAbasebenzisi abanyanisekileyo, okwangoku abambalwa kodwa abathatha inxaxheba, bayakuqaphela ukuba ibhlog ihlala itshintsha uyilo lwayo. Umsebenzi wongezwa ukuze ukwazi ukuthumela i-imeyile kumhlobo xa uthanda naliphi na inqaku kwaye namhlanje kungenzeka faka iwebhusayithi yakho kwisiginitsha yezimvo.
ENdiyathemba ukuba oku akuthethi ukwanda kogaxekile kwaye ikhuthaza abantu abaninzi ukuba bathathe inxaxheba kwibhlog, banikele ngezimvo zabo okanye baphawule ngokungathandabuzeki kwabo. Ngendlela kwaye ndifuna ukuthatha ithuba lokuba eli nqaku lidlule kumxholo oqhelekileyo we Umbulali weviniga Ukwabelana nawe ngolu hlobo lulandelayo:
ÚMva nje kuye kwaba yimfashini ukufaka iplagi kwiiblogi ezivumela vuza abona bantu banika izimvo ukufumana amakhonkco angenayo kwiwebhusayithi yakho. Oku kuthetha ukuba ukuba ungomnye wamagqabantshintshi asebenzayo kwibhlog enenani elikhulu lamaphepha kunye nesalathiso esifanelekileyo kuGoogle, uya kufumana uninzi okanye namakhulu amakhonkco angenayo kwibhlog yakho, amanye enePageRank ephezulu. Ngokomgaqo yonke into ibonakala intle, uGoogle ufumanisa ukuba ukhona, ufumana amakhonkco amaninzi angenayo kwaye ibhlog yakho iyabonakala ngakumbi kuwo wonke umntu. Kodwa kwenzeka ntoni xa uyeka ukugqabaza kwezi bhlog zikuthumela amakhonkco amaninzi? Ewe, ngequbuliso nasemva kokufakwa kwisalathiso kwesiza esikudibanisayo, zonke ezo makhonkco ziyanyamalala njengesiqhelo.
«Iya kuthathwa njani Uphando ukuba iphepha lifumana amakhulukhulu amakhonkco kwiintsuku ezimbalwa kwaye zonke zitshabalale kwangoko? »
SUkuba ndandingumphathi weinjini yokukhangela, kwaye ndiqala kwinto yokuba ezi khonkco zinokuchongwa njengenxalenye ye Blogroll, Ndicinga ukuba ungayichonga le ndlela yokuziphatha njengokuzikhusela kwispam ngokususa amakhonkco kwaye ke kuya kufuneka uphonononge ukulinganiswa kwesiza esiyekile ukunxulunyaniswa. Ngayiphi na imeko, isibonelelo ekucingelwa ukuba sinokwenzeka ukufumana uhlobo oluthile lwe «Ibhonasi malus» ngotshintsho olukhawulezileyo kwinani lamakhonkco.
PKuko konke oku kungentla, ndicinga kwakhona ngokuthatha inxaxheba kwiindawo ezinolu hlobo lweplagin. Isisombululo inokuba kukusayina kodwa ungabandakanyi i-URL yakho kumagqabantshintshi, oko ke kuthintela nabani na ofunda amagqabantshintshi akho ngokwazi okungakumbi ngawe, okanye mhlawumbi kwi lungisa iplagi Ukunika umntu onika izimvo ithuba lokuba athathe inxaxheba okanye hayi phakathi kwabagqabazi abadumileyo. Ewe ndiyishiya emoyeni kwaye kuya kuba mnandi ukwazi uluvo lwakho malunga nayo.
VUkulibala umba wotshintsho kwinkcazo yoyilo ekufuneka ndiyisusile okomzuzwana entlokweni VinagreAssino.com kuba ndikwazile ukuqinisekisa ukuba ivelise isiphumo sokwala kubantu abaninzi. Le bhlog ijolise kubantu abafuna ukufunda ukusebenzisa iinkqubo kwaye kuthi kwiimeko ezininzi abanamava amaninzi kwi-Intanethi. Aba basebenzisi beze kwiphepha kwaye bafumane kubhaliwe «Umbulali», kwi a ichibi legaziKubonakala ngathi khange bakhuthaze ukuzithemba okukhulu. Okomzuzwana kwaye ngelixa ndicinga ngendlela yokusombulula le ngxaki ndiza kushiya i-header yangoku efundwayo "Incwadi yezikhokelo kunye neethutyana zokufundisa" emva kwayo yonke into abantu abaninzi beza bekhangela kwaye akukho mntu woyikayo :).
POkokugqibela, kwaye njengesiqhelo, ndifuna ukubulela wonke umntu otyelele ibhlog kwaye ngakumbi abo banika izimvo kwaye bathathe inxaxheba ukunceda abanye abasebenzisi. Injongo elandelayo yebhlog kukufikelela kwi-2.000 yeendwendwe ezizodwa ngosuku, endinethemba lokuba ziya kwenzeka kwisithuba esimalunga neenyanga ezimbini ukusukela ngoku.
MIxesha elide ndizakuqhubeka ndipapasha amanqaku ngakumbi ukwenza ikhompyuter ibelula kubo bonke abaqala. Kude kube lelo xesha, imibuliso yemidiliya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Ukujonga iphepha le-50.000. Isikhululo esilandelayo 2.000 iindwendwe zemihla ngemihla